အလုပ်သမားများကယောဘဖျေါပွခကျြတန်ဆာနှင့် Casting / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှု Template ကို - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / အလုပ်သမားများကယောဘဖျေါပွခကျြတန်ဆာနှင့် Casting / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှု Template ကို
အလုပ်သမားများကယောဘဖျေါပွခကျြတန်ဆာနှင့် Casting / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှု Template ကို
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized5မှတ်ချက်များ 477 views
ထိုကဲ့သို့သောတွဲဖက်မှုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအဖြစ်တာဝန်ဝတ္တရား၏နံပါတ် Perform, အဆောက်အဦးပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်း, ဖြည့်စွက်မှို, နှင့်ချပြီးမှိုကိုနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကုန်စည်၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပုံဖော်ဖို့.
မလိုချင်တဲ့ကြောင်းကိုပစ္စည်းကိုလျော့ချသို့မဟုတ်ဖယ်ရှား, အုပ်စုတစ်စုလွှအသုံးချဖို့, ဓါးသွား, သို့မဟုတ်ခြစ်.
ဖြီးသို့မဟုတ်သေချာညီစေနှင့် seepage ရပ်တန့်ဖို့ပုံစံမျိုးစုံသို့ပုံစံမျက်နှာပြင်များလျှောက်ထားသို့မဟုတ် embed cardstock သို့မဟုတ်ခွဲထုတ်အေးဂျင့်များနှင့်အတူလိုက်နာရန်.
သန့်ရှင်းသော, ကောက်ချက်ချ, နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒေသများနှင့်ကိုက်ညီဆီထည့်.
အမှိုက်ပုံ, အုပ်စုတစ်စု, ဖြန့်ဝေ, အရည်စျေးပေါ, ကွန်ကရစ်, သို့မဟုတ်အင်္ဂတေတွန်း, သို့မဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များသို့မဟုတ်ပုံစံမျိုးစုံသို့သို့မဟုတ်အကြောင်းကို.
Operate နှင့်အပူပေးကိရိယာများကိုလက်ကိုင်ကိုပြောင်းလဲကုသပေးဖို့သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာ liquefy မှ, အခြောက်, သို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးအနာဖုတ်.
ကုသ bins အတွက်ငွေကောက်ခံသို့မဟုတ်အလေးချိန်တင်ဆောင်မှို, သို့မဟုတ်နှုန်းများ, အခြောက်ခံစက်များ, သို့မဟုတ်လှည်းသို့မဟုတ်စင်ပေါ်အပေါ်.
တိုင်းတာရှေးခယျြဖို့ကုန်ပစ္စည်းများလျှော့ချရန်နှင့်တိုင်းတာ, calibrating နှင့်လျှော့ချ devices များလျှောက်ထား.
သံမဏိအပိုင်းပိုင်းပျော့ပြောင်း, လျှောက်ထားမီး, နှင့်ထုတ်ကုန်ပစ်, ဥပမာအင်းလေးသရဖူကိုများအတွက်, centrifugal သတ္တုများပုံသွန်း devices တွေကိုသုံးပြီး.
နိဂုံးချုပ်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများကိုအောင်ညှိရန်နှင့်အပိုငျးပိုငျးတညျဆောကျ, လက်-tools များနှင့်အညွှန်းကိန်းအသုံးချဖို့.
Cast သို့မဟုတ် cores ပြီးနောက်ကွဲပြားခြားနားသောမြည်းကြိုးကိုဖြည်ပုံစံကလူသဘောတူညီချက်ခိုင်မာအောင်.
အနာအတွက်မျိုးတွင်ပြင်ဆင်နေယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏အဖွင့်, စွမ်းအင်နည်းလမ်းများသုံးပြီး, သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ခြစ် minimize, risers.
အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဖြန့်သံမဏိများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့အနာ Create သို့မဟုတ်ရိုက်ထည့်, အင်္ဂတေကို အသုံးပြု., ဖိုက်ဘာမှန်, ဆီလီကွန်, ထုတ်ကုန် ချ., အပြုအမူ.
protractors သို့မဟုတ် calipers အပါအဝင်ထုတ်ကုန်များ၏အချိုးအစားစစ်ကြော.
Find နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်အသေးစိတ်အညွှန်းကိန်းများအတွက်အဖြစ်စတိုင်များအပေါ်လိုင်းများခွဲထုတ်စာရေး, သို့မဟုတ် calipers, Piazza.
ပုံစံမျိုးစုံ၏တောင်မှဒေသများ, ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ် scraping လျှောက်ထား.
တန်ဆာရောနှောနေခြင်းနှင့်ဒြပ်စင်ဆုံးဖြတ်ရန်, illuminating ပစ္စည်းများ, သို့မဟုတ်အတည်ပြုတသမတ်တည်းမှပါဝင်ပစ္စည်းများ plugging, ကုစား accordingto.
တည်ဆောက်, ထား, နှင့်ဝါယာကြိုးများ cores ပြောင်းလဲ, ပရိဘောဂ, ချောင်းတွေ, အနာထဲသို့သို့မဟုတ်အလေ့အထများ, အလုပ်သမား handtools နှင့်အသေးစိတ် gauge.
အနာမစုံလင် fix, ထိုကဲ့သို့သောချစ်ပ်သို့မဟုတ်ကျိုးနှစ်ဖက်အဖြစ်, အလုပ်သမား handtools, ကွန်တိန်နာပုံဖော်, သို့မဟုတ်ပုံစံများ.
အစက်အပြောက်မျိုးစတိုင်များန်းကျင်နှင့်လွတ်လပ်စွာအင်္ဂတေအတွက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကိုထက်ဝက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဗတ္တိဇံ, ဖြစ်လာသည်, အခြားအ -generating ထုတ်ကုန်ကြောင်းသို့မဟုတ်မှို.
Reading အသိပညာ-နားလညျမှုအလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်အကြောင်းအရာနှင့်အပိုဒ် created.
ဟုအဘယ်သို့အခြားသူများမြေတပြင်လုံးအာရုံစူးစိုက်မှုတက်ကြွ-နားထောင်ခြင်း-ပေးဝေနေ, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်ပစ္စည်းများကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်လေးလည်း, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းချက်မေးမြန်းခြင်း, အစားမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းသာဓကမှာကြားဖြတ်ထက်.
critical အတွေးအခေါ်-အလုပ်သမားတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်အစားထိုးအဖြေတွေကို၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်စဉ်းစား, ပြဿနာများကောက်ချက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
သင်ယူခြင်းနည်းပညာ-အသုံးပြုခြင်းနှင့်တိကျသောအခွအေနနည်းပြတငျပွ coachingANDinstructional ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ကုသမှုကောက်နေသို့မဟုတ်အသစ်သောအရာတို့ကိုကျွမ်းကျင်သည့်အခါ.
မိမိကိုယ်ကို၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-ခြေရာကောက် / ဆန်းစစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို, ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြောင်းကိုလူတွေ, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည်မှန်ကန်သောလုပ်ရပ်များယူသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုအခြားသူများကိုသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်း’ သဘောထားတွေနဲ့သူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကျင့်သောကြောင့် သိ..
othersI အစီအမံပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ control-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ.
Marketing-Effective others to change behavior or their minds.
Negotiation-Getting others jointly and wanting to reconcile variances.
Service Orientation-Actively seeking ways to support people.
Complex Problem-Solving-Determining complex difficulties and critiquing associated information apply answers and consider and to produce selections.
Businesses Evaluation-Examining wants and solution needs to produceadesign.
Engineering Design-Engineering to provide individual and aligning tools or building requirements.
Gear Selection-Deciding the sort of tools and equipment needed to doacareer.
တပ်ဆင်နေ-Installing မော်ဒယ်များ, devices များ, cabling, လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
Encoding-Publishing computer programs for applications that are various.
Operation Tracking-Seeing tests, နာရီမျက်နှာပြင်, or different signs to make sure there is an appliance working properly.
Procedure and Handle-Handling operations of gear or systems.
Maintenance-Accomplishing routine servicing on tools and determining when and what sort of preservation is required.
Troubleshooting-Deciding causes of managing errors and determining what to do about this.
Mending-Mending systems or products utilising the necessary instruments.
Quality-Control Research-Completing assessments and inspections of products, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုမှန်းရန်.
View and Decisionmaking-Taking into consideration benefits and the relative fees of potential steps to choose the one that is best suited.
Analysis-Determining the way changes in the atmosphere, လုပျထုံးလုပျနညျး, and also conditions can affect benefits and howaprocess must operate.
Systems Analysis-Distinguishing actions or indicators of system performance along with relative to the aims of the machine appropriate or the steps hadaneed to increase effectiveness.
Timemanagement-Managing one’s own time and also the period of others.
Administration of Money-Deciding how dollars is going to be spent to have the task completed, နှင့်ရောင်းအားသည်ဤကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်..
Management of Material Sources-Experiencing and getting to the appropriate use of facilities, devices များ, နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ထုတ်ကုန်လည်ပတ်.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-directing ရှေးရှေး၏စစ်ဆင်ရေးသူတို့အနေဖြင့်, ကို, နှင့်လှုံ့ဆော် operate, ကြောင်းအလုပ်တစ်ခုကိုများအတွက်အထိရောက်ဆုံးလူတွေကွဲပြားခြားနားသွား.
အကြီးတန်း High School တွင်ဒီပလိုမာ (GED သို့မဟုတ် High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
ဇှဲကောငျးခွငျး – 88.72%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 91.57%
အမိန့် – 83.88%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 89.34%
အခြားသူများများအတွက်ပြဿနာ – 85.04%
ယဉ်ကျေးမှုနေရာချထားခြင်း – 92.16%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 92.25%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 87.44%
ပါဝင် – 93.45%
အသေးစိတ်၏အသိအမြင် – 93.42%
ရိုးသားခြင်း – 90.20%
လွတ်လပ်ရေး – 82.13%
တိုးတက်ရေး – 81.07%
စဉ်းစား – 80.75%
Pingback: Use These Headings And Selling Points For A Lively Resume - သြစတြေးလျဘလော့ရေးစင်တာ
Pingback: Jobs — Employment Agent
Pingback: How Is It Possible To Be Successful In Writing A Job Seeker Resume| | မွေပွငျအောကျလမျး
Pingback: Are Fake Jobs A Major Problem? | | မွေပွငျအောကျလမျး
Pingback: Resume Searching: Signs A Person That You Should Hire An Assistant